Fitaovana fanaka ikea miaraka amina talantalana na fanjono | Bezzia
Maria vazquez | 10/09/2021 18:00 | Ataovy ny tenanao
Ireo teny amin'ny teny anglisy dia miha betsaka hatrany amin'ny voambolantsika isan'andro. Ary na dia tsy mahay mandika ny maro amin'izy ireo aza izahay dia afaka mampifandray azy ireo amin'ny hetsika manokana. Mitranga izy io amin'ny teny hoe hack, izay mifandray amin'ny maro amin'ny fiovana sy ny fanovana ataon'ny olona mamorona amin'ny fanaka an'ny goavambe soedoà.
Androany dia misy hevitra maro ao amin'ny Internet hanovana ny fanaka Ikea. Ny ankamaroan'ireo hacks Ikea fanaka ireo dia mifototra amin'ny firavaka haingo manokana toy ny cannage amin'ity tranga ity. Ary izany no izy fanaka miaraka amina wicker grid na cannageNanjary lamaody izy ireo efa-taona lasa izay ary tsy namoy ny heriny.
1 Ny fironana fitifirana
2 Fitaovana fanaka Ikea miaraka amina tafondro
2.1 Akanjo Ivar
2.2 Fivarotamboky Billy / Oxberg
Ny fironana fitifirana
Tokony hiverina amin'ny 2017 isika vao hahatadidy ny firoborobon'ny fanaka fitifirana. Avy eo, ny tontolon'ny haingo, fa tsy ny tontolon'ny haingon-trano ihany, dia voafitaky ny voajanahary, ny artisanal ... ary ny firafitry ny firafitra dia tsy nisalasala nampiditra an'io karazana fanaka io tamin'ny fanangonana azy ireo.
Ilay tafondro, araka ny iantsoana azy matetika teknika randrana, dia nanome aingam-panahy ho an'ny mpamorona am-polony hamorona fanangonana fanaka isan-karazany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ary tsy gaga izahay satria ity takelaka tanety ity dia manome toetra sy hafanana miavaka amin'ny fanaka.
Rattan na kofehy wicker Nahasarika ny sain'ny endrika DIY maro ihany koa izy ireo. Ary ny vidiny izay mazàna matetika amin'ny fanaka fitifirana dia maro no nahita tamin'ity karazana tetikasa ity ny hany fomba fampidirana azy io tao an-tranony. Ary ny fiarahana miasa amin'ny fandefasana tafondro sy ny fanaovana manokana an'ity fitaovana ity sy ny fanaka ary ny kojakoja ao an-trano hatrany am-boalohany, dia mora ihany, satria hanana fotoana hanamarinana ianao.
Fitaovana fanaka Ikea miaraka amina tafondro
Misy hacks fanaka Ikea tsy tambo isaina miaraka am-bifotsy. Izahay, toy ny mahazatra, dia nifidy izay tiana indrindra. Nataontsika izany raha jerena ny vidiny voalohany amin'ny fanaka Ikea mba hahafahan'izy ireo idirana ary ny fahasarotan'ilay tetikasa.
Miaraha miasa amin'ny tafondroAraka ny efa nolazainay, tsy sarotra izany, saingy mila manisa zavatra maro ianao rehefa manao azy. Miankina amin'ny hamafin'ny fitaovana sy ny endrika anehoana azy dia mety mahaliana ny manondraka azy amin'ny rano mafana mba hahamora kokoa ny famelarana na fanaovana maodely azy, araka ny itiavanao azy. Ho fanampin'izany, ho tena zava-dehibe ny hisafidianana ny adhesive adiresy mety ao an-tsaina - raha hampiasa adhesive ianao - tsy hadino hatrany na ny takelaka na ny tampon-tany izay tadiavinao.
Ny rafitra fitehirizana IVAR Tena azo ampiharina izy io fa mamaly ny filan'ny mpanjifa Ikea isan-karazany nandritra ny 50 taona. Hazo tsy voatsabo tsara, fitaovana voajanahary tena maharitra sy mahatohitra izay azonao karakaraina amin'ny alàlan'ny diloilo na savoka, ny fitafiana Ivar dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ity andiany ity. Mirefy 80x30x83 cm, misy talantalana roa ahafahanao mihetsika mampifanaraka ny habaka amin'izay ilainao. Ary 59 € fotsiny ny vidiny.
Ny fanaingoana an'ity kabine ity amin'ny alàlan'ny fandevenana dia tena tsotra araka ny asehony amintsika Septambra Manova ao amin'ny tutorial anao. Izy no nahita antsika ny mety an'ity fitambarana ity ary nanao izany tamin'ny fomba tsotra kokoa, mametaka ny takelaka mivantana eo am-baravarana an'io fanaka io ary manampy kitapo sasany. Saingy tsy izany ihany no mety hitranga raha ny fanovana ity fitafiana ity araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony; Azonao atao ihany koa ny manapaka ny varavarana sy manolo ny ampahan'ny hazo amin'ny alàlan'ny rongony, amin'izay hahatsapanao izay ao anaty lalimoara.
Fivarotamboky Billy / Oxberg
Ikea milaza an'izany isaky ny 5 segondra dia amidy ny fivarotam-boky Billy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Zava-misy mahavariana raha dinihina, ankoatr'izay, ny rakitsoratr'i Billy dia tao amin'ny katalaogin'ilay orinasa hatramin'ny 1979. Androany dia mbola io no safidy tsara indrindra ho an'ny mpamaky, fa tsy ho an'ny mpamaky ihany.
Ny singa fitahirizana Billy / Oxberg misy varavarana fitaratra dia safidy tsara hanatsarana ny toerana fitahirizana ao an-tranontsika. Mirefy 80x30x202 cm, misy talantalana azo ovaina izy ary manana fahaiza-manao lehibe. Mametaka grates amin'ny varavarana fitaratra Ho tsotra ihany koa io, araka ny hitanao amin'ny horonantsary Lone Fox. Horonantsary viralin'ireo natokana ho an'ny hack hack Ikea.
Mazava ho azy fa mihoatra ny filalaovana ny antsipiriany amin'ny takelaka azonao atao milalao loko hahatratra vokatra mahavariana na mifanaraka amin'ny haingon-trano ao an-tranonao. Fiovana tsotra eo amin'ny zotram-panaka, manova azy tanteraka. Tianao ve ireo hacks Ikea fanaka ireo? Jereo ireto hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ataovy ny tenanao » Fandringanana fanaka Ikea miaraka amina talantalana na am-bifotsy